Carnot okirikiri: njirimara, usoro na mmachi | Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu okwu na physics na thermodynamics nke Okirikiri Carnot anyị na-ezo aka n'usoro usoro nke na-ewere ọnọdụ na injin Carnot. Ọ bụ ezigbo ngwaọrụ nwere naanị ole na ole usoro ntụgharị. Nke a pụtara na ozugbo usoro ndị a emeela, enwere ike ịmaliteghachi ọnọdụ izizi. A na-ahụta ụdị moto a na physics dị ka ezigbo moto ma jiri ya nwee ike ịhazi atụmatụ ndị ọzọ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara okirikiri Carnot na njirimara ya bụ isi.
2 Gịnị bụ okirikiri Carnot?
3 Nkeji nke okirikiri Carnot
Anyị na-ekwu na a na-ahụta ụdị injin a dị ka ezigbo injin. Nke a bụ ebe ọ bụ na enweghi ike ịgbanye ike, n'ihi esemokwu na ala ma ọ bụ ikuku na enweghị ụdị viscosity. Niile njirimara ndị a ma ọ bụ ọghọm na-ebilite na igwe ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume iji 100% gbanwee ike ọkụ n'ime ọrụ bara uru. Agbanyeghị, mkpo ahụ Carnot nwere ike ịme ka ọnọdụ ndị a niile nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma ma gbakọọ ihe n'ụzọ dị mfe.
Mgbe anyị zụrụ injin anyị na-eme ya bido na ihe nwere ike ịrụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, isi ihe eji eme ihe bụ gas, mmanụ ma ọ bụ uzuoku. Mgbe ihe ndị a nwere ike ịrụ ọrụ na-agbanwe mgbanwe dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide, mepụta ụfọdụ ọdịiche na olu ha. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịmegharị pistin n'ime cylinder iji nwee moto ahụ.
Gịnị bụ okirikiri Carnot?
Nke a na - eme n’usoro a na - akpọ engine Carnot. Na nke a engine, e nwere ezigbo gas nke na-nchọ na a cylinder na nke na-nyere na a pistin. Pistin ahụ na kọntaktị na isi mmalite dị iche iche. N'ime usoro a enwere usoro ụfọdụ anyị nwere ike ichikota na usoro ndị a:
A na-enye ụfọdụ ngwaọrụ okpomọkụ na ngwaọrụ ahụ. Igwe a na-ekpo ọkụ na-abịa site na mmiri dị ọkụ dị elu.
Mkpụrụ ahụ na-arụ ọrụ ekele maka ikpo ọkụ a ga-eweta
A na-eji ụfọdụ ọkụ eme ihe ma ụfọdụ na-ala n’iyi. A na-ebufe ihe mkpofu na tankị ọkụ nke dị na obere okpomọkụ.
Ozugbo anyị hụrụ usoro niile, anyị ga-ahụ ihe ọkwa nke usoro Carnot dị. A na-eme nnyocha nke usoro ndị a site na iji eserese nke a na-atụle nrụgide na olu. Ebumnuche nke injin ahụ nwere ike ịbụ na ọ ga-eme ka tankị nke abụọ dị jụụ site n'iwepụta okpomọkụ na ya. Na nke a, anyị ga-ekwu maka igwe jụrụ oyi. Ọ bụrụ na, na ntụle, ebumnobi bụ ịnyefe ọkụ na ebe nchekwa ọkụ nke otu, mgbe ahụ anyị ga-ekwu maka mgbapụta ọkụ.
Ọ bụrụ na anyị nyochaa eserese na olu eserese, anyị ga-ahụ ngbanwe nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ nke injinia na-egosi n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ ndị na-esonụ:
Ọ bụrụhaala na ọnọdụ okpomọkụ dị mgbe niile. N'ebe a, anyị na-ekwu maka usoro isothermal.
Enweghị mbufe ọkụ. Nke a bụ ebe anyị nwere mkpuchi mkpuchi.
Usoro nke Isothermal kwesiri ijikọta ibe ya ma mezuo nke a site na mkpuchi mkpuchi.
Nkeji nke okirikiri Carnot
Na mmalite anyị nwere ike ịmalite na akụkụ ọ bụla nke okirikiri nke gas nwere ọnọdụ ụfọdụ nke nrụgide, olu na ọnọdụ okpomọkụ. Nke a na gas ga-enweta usoro usoro nke ga-enwe ike iweghachite ya na ọnọdụ mmalite. Ozugbo gas laghachiri n'ọnọdụ mbụ ya, ọ nọ n'ọnọdụ zuru oke ịmalite usoro ọzọ. A na-enye ọnọdụ ndị a ma ọ bụrụhaala na ike dị n'ime ya na njedebe dị otu ike ya na mmalite. Nke a pụtara na a na-echekwa ike. Anyị amataworị na ike adịghị eke ma ọ bụ bibie, kama ọ gbanwere naanị.
Agba nke mbụ nke oge Carnot dabere na mgbasawanye nke ikuku. Na nke a, usoro ahụ na-etinye okpomọkụ site na tank tank 1 ma na-agbasawanye nke ikuku. N'ihi ya, ụda gas na-abawanye ma nrụgide ahụ na-ebelata. Otú ọ dị, ọnọdụ okpomọkụ na-adịgide adịgide ebe ọ bụ na mgbe gas na-agbasawanye ọ na-ajụ oyi. Ya mere, anyị maara na ike dị n'ime ya na-adịgide oge.
Na nke abụọ ogbo anyị nwere a mgbasawanye adiabatic. Adiabatic pụtara na usoro ahụ anaghị enweta ma ọ bụ hapụ okpomọkụ. A na-enweta nke a site na itinye gas na mkpuchi ikpo ọkụ dịka egosiri n'elu. Ya mere, na mgbasawanye adiabatic olu na-abawanye na nrụgide ahụ na-ebelata ruo mgbe ọ ruru ọnụ ala ya.
Na nke atọ anyị nwere isothermal mkpakọ. N'ebe a, anyị na-ewepu mkpuchi ahụ ma sistemụ ahụ na-abanye na nọmba tankị nke ọkụ 2, nke ga-adị na okpomọkụ dị ala karị. Maka nke a, sistemu ahụ bụ ọrụ maka ịnyefe ọkụ ọkụ na-ejighị ya na tankị ọkụ a. Ka okpomọkụ na-apụta, nrụgide ahụ na-amalite ịbawanye na olu iji belata.
N'ikpeazụ, na njedebe ikpeazụ nke usoro Carnot anyị nwereadiabatic mkpakọ. N'ebe a, anyị na-alaghachi na ọkwa nke mkpuchi ọkụ site na usoro ahụ. Nrụgide ahụ na-abawanye olu na-adalata ruo mgbe ọ ruru ọnọdụ mbụ. Ya mere, okirikiri ahụ dị njikere ịmalite ọzọ.
Dịka e kwuru na mbụ, injin Carnot na-arụ ọrụ nke ọma. Nke a pụtara na o nwere oke ya kemgbe ezigbo motọ enweghị 100% arụmọrụ. Anyị maara na igwe Carnot abụọ nwere otu arụmọrụ ma ọ bụrụ na ha abụọ na-arụ ọrụ na otu ọdọ mmiri ahụ. Nkwupụta a pụtara na enwere m mmasị n'ihe anyị na-eji, ebe ọ bụ na arụmọrụ ahụ ga-abụ nke onwe ya kpamkpam ma enweghị ike ibulite ya.
Nkwubi okwu anyi natara site na nyocha mbu bu na Carnot okirikiri bu uzo nke usoro ihe omuma nke apuru iru. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, karịa nke ahụ, agaghị enwe injin nwere arụmọrụ ka ukwuu. Anyị maara na mkpuchi ọkụ anaghị adịcha mma ma usoro adiabatic adịghị adị, ebe ọ bụ na enwere mgbanwe okpomọkụ na mpụga.
N'ihe banyere ụgbọ ala, ngọngọ nke ọkụ ọkụ na n'aka nke ọzọ, ngwakọta nke mmanụ ụgbọala na ikuku anaghị akpa agwa, ị na-ekwurịta okwu nke ọma. Ghara ikwu ihe ụfọdụ eme ka mbelata dị ukwuu na arụmọrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere okirikiri Carnot na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Okirikiri Carnot
Olee otu temometa temometa si arụ ọrụ?